Isbitaalada aya ka howlgelayaan dhaqaatiirta ajnabiga oo kusii badanaya Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Isbitaalada aya ka howlgelayaan dhaqaatiirta ajnabiga oo kusii badanaya Muqdisho
21st March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Magaalada Muqdisho waxaa dhawaan laga furay isbitaal casri ah oo lagu magacaabo – Muqdisho City Hosbital – kaasoo lagu daweyn doono cudurro fara badan oo mararkii hore dalka dibaddiisa loo aadi jiray.
Isbitaalkan ayaa ku yaalla degmada Hodan, gaar ahaan xaruntii dowladdii Carte waxaana ka howl-gala dhakhaatiir isugu jirta Somali iyo Ajaanib kuwaasoo ku takhasusay cudurro kala duwan; waxaana haatan isbitaalkaani uu qaabilaa bukaanno fara badan.
Agaasimaha Muqdisho City Hospital, Dr.Cabdulqaadir Axmed Yuusuf oo ka warramay sababaha keenay in isbitaal noocan oo kale ah ay ka furaan Muqdisho ayaa sheegey inay dhakhaatiir isbahaystay dareemeen in dadka Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan sidii loola tacaali lahaa dhamaan cururada kala duwan ee dhibaatooyinka ku haya dadkeenna Soomaaliyeed.
“Muqdisho City Hosbital waxaa si gaar ah loogu daaweeyaa cudurrada kala ah; maqaarka iyo qurxinta jirka (Dermatology), Quruxinta Ilkaha iyo Afka (Dental), cudurrada cunaha, sanka iyo dhegaha (ENT), Qaliinnada guud, xameetida, uur-ku-jirta iyo qanjirka kaadi haysta (Prostates). Dhalmada; cudurrada neerfaha, cudurrada carruurta iyo shaybaar casri ah,” ayuu yiri agaasimaha isbitaalka.
Waa markii ugu horreysay oo Muqdisho laga furo isbitaal casri ah oo lagu daaweynayo cudurro badan oo dhamaantood loo aadi jirey dalka dibaddiisa, wuxuuna isbitaalkani ka saacidi doonaa Somali badan inay dalkooda Hooyo ku helaan adeeg caafimaad oo dhamaystiran.
Afgooye: Dad rayid ah oo ku dhintay qarax iyo rasaas dhacay
Dad ka badan 10 oo ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay Hiiraan